TI-IM : “Mbola mila miara-mianatra ny demokrasia isika” | NewsMada
TI-IM : “Mbola mila miara-mianatra ny demokrasia isika”
“Matoa izahay nikarakara adihevitra momba ny demokrasia, misy zavatra tsy mbola tomombana eto amintsika ary mila hatsaraina. Mbola mila miara-mianatra ny demokrasia isika rehetra eo amin’ny andavanandro” hoy ny tale mpanatanteraka eo anivon’ny Transparency International-Initiative Madagascar (TI-IM), Rafitoson Ketakandriana, momba ny takalo hevitra nokarakarain-dry zareo momba ny fiarovana ny mpanaitra (Lanceurs d’alerte), tamin’ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny demokrasia, afakomaly.
Anisan’ny singa mampisy ny demokrasia ny fandraisana anjaran’ny tsirairay ao anatin’ny fiainam-pirenena. Mivoy ny fangaraharana sy ny fahamarinana ary ny tamberin’andraikitra ny TI-IM. Ireo ny tarigetra ijoroany. Resy lahatra ry zareo fa anisan’ny mampijoro ny demokrasia ireo singa telo ireo. Tsy eto Madagasikara ihany izany fa manerana izao tontolo izao.
Tsapa anefa fa mbola somary malaina ny olom-pirenena. Satria hoe mahantra ny Malagasy, sahirana amin’ny fiainana, tsy te hieritreritra an’izany. Mifameno na ny ady amin’ny kolikoly, na ny ady ho amin’ny demokrasia, na ny fangaraharana: mila ny fandraisana anjaran’ny olom-pirenena tsirairay.
Tena manampy be amin’ny fametrahana ny demokrasia marina eto Madagasikara ny fiarovana ny mpanaitra amin’ny lafiny fangaraharana sy ady amin’ny kolikoly. Mbola demokrasia sadasada no misy hatramin’izao, araka ny nambarany.